Tottenham Hotspur oo dharbaaxi xoogan la damacsan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona – Gool FM
Tottenham Hotspur oo dharbaaxi xoogan la damacsan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
(Tottenham) 13 Okt 2018. Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Tottenham ay dalab weyn u soo bandhigtay xidigeeda khadka dhexe ee Christian Eriksen si uu u saxiixo heshiis cusub.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in dalabka ka yimid maamulka kooxda Tottenham Hotspur uu yahay mid aad u xoogan isla markaana si weyn ugu dhow kii ay Spurs-ka horey ugu soo bandhigtay Harry Kane taasoo ka dhigtay inuu ogolaado saxiixida heshiis 6 sano ah.
26 jirkan ayaa heshiis uu kula jira kooxda Tottenham Hotspur wuxuu dhacayaa 2020, laakiin kooxda reer London ayaa isku dayeysa inay sii dheereyso heshiiska Christian Eriksen.
Wariye kaga howlgala wargeyska “Mundo Deportivo” ee magaalada London ayaa wuxuu yiri: ” Christian Eriksen waxaa haatan miiska u saaran heshiis qaali ah, kaasoo la mid ah kii Harry Kane ee xili ciyaareedkii lasoo dhaafay oo kale”.
Kooxda Real Madrid ayaa la fahansan yahay inay si weyn u xiiseeneyso inay lasoo saxiixato Christian Eriksen si uu ugu noqdo badalka Luka Modrić, kaasoo la filayo xili ciyaareedka soo aadan in uu ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu.
“Uma qalmo inuu noqdo hogaamiye” _ Diego Maradona oo dabka kusii shiday Lionel Messi
"Maaliyadii uu Messi iga badashay wuxuu iminka ku Tir-Tirtaa Lugaha BAABUURKIISA!!.".-